Indostrian'ny varotra haino aman-jery sosialy 2012
GO-Globe.com dia namorona infographic, ny Indostrian'ny varotra haino aman-jery sosialy, izay mifantina angon-drakitra manan-danja avy amin'ny Social Media Examiner's Tatitra momba ny indostrian'ny varotra sosialy 2012. Ny Infographic dia mandrakotra ny fironana farany momba ny haino aman-jery sosialy, ny fanambin'ny haino aman-jery sosialy, ny paikadin'ireo mpivarotra media sosialy ary maro hafa.
Raha ny fahitako azy dia miseho ny fanamby lehibe. Na dia manatsara hatrany aza ny teknolojia misy antsika, dia mbola miady mafy ny orinasa hampiasa media sosialy tanteraka, hahita ny influencers, handrefy ny vola azo amin'ny famatsiam-bola, hanangana mpihaino ary hamolavola fomba fiasa izay tsy mitaky loharano be loatra. Ny tena izy dia tsy mampino ny tombotsoan'ny media sosialy, saingy ny ezaka takiana mba hahazoana ireo valiny ireo dia tohizan'ny indostria iray izay manohy mivarotra ny tenany ary mametraka avo ny fanantenana.
Tags: Sary torohayfanamby amin'ny media sosialyMpandinika ara-media sosialyindostrian'ny media sosialyindostrian'ny marketing ara-tsosialytatitra momba ny indostrian'ny marketing sosialy
Marketing ara-tsosialy ho an'ny fitsangatsanganana sy fandraisana olona
15 Okt 2012 amin'ny 2:56 PM
Infographic mahafinaritra. Ny fahitana ny mpihaino kendrenao dia tena zava-dehibe tokoa, ny media sosialy dia tsy fanontaniana isa isa. Ny tena zava-dehibe dia ny fahazoana fifandraisana tena izy amin'ny mpihaino kendrenao.
30 Nov 2012 amin'ny 5:48 maraina
Mampifantoka hatrany ny hafatrao amin'ny filàn'ny mombamomba anao manokana
na mpanjifa ary aza matahotra ny hanilika ireo izay tsy manana sitra
mampiasa ny serivisinao. Izy ireo dia mety hahatonga ny tarehimarika ho tsara, fa izy ireo dia
tsy misy lanjany ny orinasanao. Raha ny marina, raha mandoa ny bandwidth an'ny bilaoginao ianao
amin'ny gigabyte na mandoa vola isaky ny mpamaky ianao amin'ny mailakao amin'ny mailaka
serivisy, samy mandany ny volanao sy ny fotoanao ireo mpihaza freebie.
Aug 21, 2013 amin'ny 6: 05 AM
Misaotra noho ny fampahalalana sarobidy nomenao mazava tsara.